Enin-dahy ireto dahalo nanafika ireo, izay nirongo basy lava iray sy fitaovna maranitra isan-karazany. Nanara-dia avy hatrany ny zandary dimy avy ao amin’ny paositra Ambohimiadana sy ny fokonolona tamin’ny 11 ora alina.
Tratra teny an-dalana ihany ireo dahalo ka raikitra ny fifampitifirana teo amin’ny toerana antsoina hoe : Tranokambana, efa any amin’ny kaominina Fihaonana, distrikan’Ankazobe. « Omby folo no azo tamin’io fifandonana io. Nanohy ny diany nianavaratra ireto olon-dratsy.
Nefa mbola notohizana ny fanarahan-dia ka nanao tongotra an-katoka ireo dahalo. Avotra avokoa ireo omby 16 izay efa tafaverina any amin’ny tompony », hoy ny loharanom-baovao avy amin’ny zandarimaria.